၂၀၂၀ မှာ ခေတ်စားလာပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Makeup remover | yathar Magazine
မိန်းကလေးတွေအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတော်တော်များများက အချိန်နှင့်အမျှ အသစ်အသစ်တွေ အများကြီး ဖန်တီးပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာလည်း ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ Makeup remover တွေကလည်း ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်သုံးနေကြ Cotton pad တွေနဲ့ Makeup remover တွေနဲ့က ဘာတွေကွာလဲ။ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲ။ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ ဆိုတာလည်း တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားနေကြမှာ သေချာပါတယ်။ အားလုံးစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Makeup remover တွေကို အလှကုန်ပ စ္စည်း ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက Brand အမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Cotton pad တွေကို ဘယ်လိုလျှော်ကြမလဲ?
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Cotton Pad လေးတွေက လျှော်တဲ့အခါ အမွှေးဖွာမှာစိုးတာကြောင့် နူးညံ့တဲ့ အိတ်တစ်လုံးထဲမှာ ထည့်ပြီး လျှော်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ မိတ်ကပ်ဖျက်တိုင်း ဘက်တီးရီးယားတွေ ကပ်ညိနိုင်တဲ့အတွက် မကြာခဏဖွတ်လျှော်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖွတ်လျှော်တဲ့အခါမှာလည်း မျက်နှာအသားအရည်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အရမ်းပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။
ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ Cotton pad က Hygienic ဖြစ်ရဲ့လား
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Cotton pad က Hygienic ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မိတ်ကပ်ဖျက်ပြီးတိုင်း ဘက်တီးရီးယားတွေ မတွယ်ကပ်နိုင်အောင် ဆေးကြောပေးသင့်ပါတယ်။
Cotton pad အစားဘာကိုအသုံပြုနိုင်သေးလဲ?
Cotton pad အစား ဝါးနှင့် မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာကို အသုံးပြုထားတဲ့ pad များကိုလည်း အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Cotton pad များကို အသုံးပြုပြီး ပိုပြီးလှကြပါစေနော်။